हकप्रदको लोभमा नउचालिनोस् बिमाको सेयरमा !
तोकिएको समयमै चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि बिमा कम्पनीहरुले ठूलो परिमाणमा हकप्रद दिने प्रलोभनमा अहिले सेयर लगानीकर्ताहरु उचालिएका छन्। यसअघि कारोबार हुन्जेलसम्म एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा भएको लगानीकर्ताको भीडले नै यसको पुष्टि गर्दछ।
पाँच वर्षदेखि साधारणसभा नगरेको एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ६ गुणा हकप्रद दिने भएपछि मूल्य २ हजार ९ सय नाघ्यो। जुन हालसम्मकै उच्च हो। गत फागुन १ गते प्रतिकित्ता ११ सय ६८ रहेको सो कम्पनीको मूल्य एकाएक उचालिएपछि धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा हाल कारोबार रोकिएको छ।
मूल्य बढाउने उद्देश्यले पहिले नै सूचना चुहाइएको भन्दै बोर्डले कम्पनीको कारोबार रोकेको हो। प्रतिसेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ मात्रै रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ७८ छ। जवकि यति नै प्रतिसेयर आम्दानी भएको वाणिज्य बैंकको सेयर ४ सयभन्दा कममा नै पाइन्छ।
हकप्रद निश्कासनका लागि स्वीकृति पाएका लुम्बिनी र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको पनि स्थिति त्यस्तै छ। हिमालयनले १ बराबर १. ६६ को अनुपातमा अर्थात कुल ३८ लाख ५२ हजार कित्ता हकप्रदका लागि स्वीकृति पाएको छ। गत फागुनमा ८ सय १० रुपैयाँ रहेको हिमालयनको मूल्य अहिले १७ सय नजिक छ।
१ बराबर १ को अनुपातमा ३९ लाख कित्ता हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति पाएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको मूल्य फागुन १ गते ९२० रहेकोमा अहिले साढे १७ सयभन्दा माथि छ।
अधिकांश बिमा कम्पनीहरुको वर्षौदेखि साधारणसभा नै हुन सकेको छैन। अस्तव्यस्त व्यवस्थापन, सुस्त व्यवसाय, ठूलो लगानीमा न्यून प्रतिफल जस्ता कमजोर पक्ष बिमा कम्पनीहरुमा छ। बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं संचालन भइरहेका बिमा कम्पनीहरु चुस्त रुपमा अघि बढ्न नसकेको र धेरैजसोको साधारणसभा पनि वर्षौदेखि हुन नसकेको स्पष्ट पार्छन्।
‘भएका बिमा कम्पनीहरु वर्षौदेखि निदाएकाले पनि नयाँलाई लाइसेन्स दिन हामीलाई बल पुगेको हो’ सेतोपाटीसितको कुराकानीमा उनले भने। अब बिमा समितिले नियमित रुपमा बिमा कम्पनीहरुको अनुगमन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। ‘सीमित केही कम्पनीबाहेक अधिकांशले नियमित रुपमा साधारणसभा गरेका छैनन्’ चापागाईंले भने। भद्रगोल अवस्थामा रहेका बिमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य एकाएक उचालिएपछि धितोपत्र बोर्डको समेत ध्यान तानिएको छ।
बिमा कम्पनीहरुको मूल्य उच्च हुनुमा आकर्षक प्रतिफल नभई आपूर्ति र जोखिम न्यून हुनु नै प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् विज्ञहरु। ‘तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम मानिन्छ, सबै लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोमा अटाउनका लागि आपूर्ति कम छ, त्यसकारण मूल्य बढेको हो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक विज्ञले भने ‘अहिले पनि धेरैको प्रतिफल क्षमता कमजोर छ, पुँजी बढाएपछि त झन् अति नै कमजोर हुन्छ।’
उचालिएर अहिले बिमा कम्पनीमा लगानी गर्नुको साटो वाणिज्य बैंकहरुको सेयर किन्नु नै उचित हुने उनले सुझाए। ‘पुँजी बढाएर पनि बैंकहरुले आक्रामक रुपमा व्यवसाय विस्तार गरेका छन्, तर संचालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरुले व्यवसाय बढाउन सकेकै छैनन् भने नयाँ कम्पनीहरु पनि थपिएपछि के होला ?’ उनले भने।
बिमा कम्पनीहरुको सेयर किन्नेलाई हकप्रदको प्रलोभनमा नफस्न उनले आग्रह गरे। ‘भोलि कम्पनीहरु थपिएपछि र पुँजी बढेपछि बिमा कम्पनीहरुको सेयर आपूर्ति पर्याप्त हुन्छ, अनि मूल्य नियन्त्रणमा रहन्छ’ उनले भने ‘अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धा बढ्दा सीमित केही कम्पनी मात्रै माथि आउने हो।’
ऐनअनुसार सबै बिमा कम्पनीहरुलाई २०७५ असारभित्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यतिबेलासम्म जीवन बिमा कम्पनीहरुले २ अर्ब र निर्जीवनले १ अर्ब पुर्याउनुपर्दछ। त्यसकै लागि कम्पनीहरुले ठूलो परिमाणको हकप्रदलाई विकल्पका रुपमा अघि सारेका छन्।
हाल १७ वटा जीवन र ९ वटा निर्जीवन गरी २६ कम्पनीहरु छन्। यीमध्ये जीवन बिमातर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको मात्रै चुक्ता पुँजी पुगेको छ भने अन्यको निकै न्यून छ। हकप्रद नदिने भएपछि चुक्ता पुँजी पुगिसकेको नेपाल लाइफको भने मूल्य बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै निर्जीवन कम्पनीमध्ये शिखर इन्स्योरेन्स तोकिएको चुक्ता पुँजीको नजिक छ भने अरु कम्पनीहरु निकै तल छन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असार ११, २०७४ ०२:३३:३७